प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी दाङ कि बुटवल ? नेपालगञ्ज र कपिलवस्तुको पनि दाबी
Wed, Jul 18, 2018 | 10:46:47 NST
17:39 PM (7months ago )
बर्दिया, पुस ११– नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संरचना अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सकिएको छ ।
७ वटै प्रदेशमा कसले सरकार बनाउने भन्ने पनि लगभग टुंगो लागेको छ । तर प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा कुनै टुंगो छैन । आफ्नो ठाउँमा प्रदेशको राजधानी राख्नु पर्ने माग हरेक प्रदेशमा उठेको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा त आफ्नो ठाउँमा राजधानी बनाउनु पर्ने माग अझ बढि चर्किएको छ ।
१२ वटा जिल्ला समेटिएको प्रदेश नम्बर ५ मा ठूला शहर र पर्याप्त सरकारी जग्गा जमिन भएकाले हरेक शहरले राजधानी दावी गरेका छन् । दाङ्गको घोराही वा बेलझुण्डी लमही, रुपन्देहीको बुटवल, लुम्बिनी र बाँकेको नेपालगञ्जले राजधानीको दावी गरिरहेका छन् । चिया पसलदेखि चोक चौतारामा प्रदेश राजधानी आफ्नै ठाउँमा हुनु पर्ने माग उठ्छ भने पहुँच भएकाहरु केन्द्रसम्म दौडधुपमा लागिरहेका छन् ।
प्रदेश नम्बर ५ का शहरी क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेकाहरुले आफ्नै ठाउँमा राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यस्तो प्रतिवद्धता जनाउने सबैजसो उम्मेदवारले चुनाव जितेका छन् । तसर्थ उनीहरुलाई आश्वासन पूरा गर्न दवाव परेको छ । दाङ्गको घोराही वा बेलझुण्डी लमही, रुपन्देहीको बुटवल, लुम्बिनी र बाँकेको नेपालगञ्जका तर्फबाट राजधानीको माग राख्दै सरकारलाई पत्र बुझाइएको छ ।
जस अनुसार सरकारले दाङको घोराही, बेलझुण्डी र रुपन्देहीको बुटवलसहितका मुख्य शहरहरुलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । यसका लागि प्रतिवेदनसमेत सबै शहर र जिल्लाले बुझाएका छन् । तर कहाँ राजधानी बनाउने भनेर निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेश नम्बर ५ को राजधानीमा तानातान बढ्दै गएको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी दाङको लमहीमा किन ?
दाङ आसपासका केही जिल्लाको विकासका लागि पनि बेलझुण्डी लमहीमा राजधानी बनाउन उपयुक्त रहने यस क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ । दाङको बेलझुण्डी लमहीलाई राजधानी बनाउने प्रस्तावमा आधाभन्दा बढी दंगाली सहमत छन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने उपत्यका भएको बेलझुण्डी लमही देउखुरी क्षेत्रलाई राजधानी बनाउनु पर्नेमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सञ्जयकुमार गौतम पनि सहमत हुनुहुन्छ ।
लमही लगभग सबैजसो जिल्लाको बिच भागमा पर्ने भएकाले पूर्वमा नवलपरासीको बर्दघाट र पश्चिममा बर्दियाको कर्णाली पुल, उत्तरमा रोल्पा र प्युठानसम्मका सबै ठाउँलाई पायक पर्छ । प्रयाप्त खाली सरकारी जमिन, सार्वजनिक भवन भएको र विकासतिर अघि बढेका कारण पनि यो ठाउँ राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको दावी छ ।
बेलझण्डी लमहीलाई राजधानी बनाएर प्रदेशसभाले लुम्बिनी प्रदेश वा स्वर्गद्वारी प्रदेश जे नाम राखे पनि उपयुक्त रहने बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्तकुमार थारुको भनाइ छ ।
देशको राजधानी बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार बुटवलमा पनि छ । एयरपोर्ट, प्रदेशसभा बस्नका लागि सभागृह, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई बस्नका लागि क्वाटर, मन्त्रालय राख्नका लागि प्रशस्त भवनहरु छन् । अधिकांश भौतिक संरचनाले सम्पन्न ठाउँ हो बुटवल । केन्द्रीय तहमा प्रभाव पार्न सक्ने बुटवल आसपासका नेताले बुटवललाई नै राजधानी बनाउने पहल सुरु देखि नै गरेका हुन् । अझ यहाँबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिका चुनावी एजेन्डामै बुटवललाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । त्यसले गर्दा पनि यहाँका नागरिक बुटवललाई राजधानी बनाउनु पर्ने माग राखिरहेका छन् ।
प्रदेशको राजधानी माग गर्ने प्रदेश नम्बर ५ को अर्को शहर लुम्बिनी हो । ऐतिहासिक शहर भएका कारण पनि प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने यस क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ । ऐतिहासिक शहर, धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्यका साथै पूर्वाधारसमेत भएकाले लुम्बिनी नै प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी हुनु पर्ने माग बढेको छ । त्यस्तै भैरहवामा बन्दै गरेको गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पनि नजिकै पर्ने कारणले लुम्बिनी नै प्रादेशिक राजधानीका लागि उपयुक्त भएको यहाँका नागरिकको तर्क छ ।
बाँकेको नेपालगञ्जको आफ्नै दाबी
प्रदेशको राजधानी माग गर्ने प्रदेश नम्बर ५ को अर्को शहर हो नेपालगञ्ज । पञ्चायतकालभन्दा पहिलेदेखि पश्चिम नेपालको मुख्य बजार हो नेपालगञ्ज । बाँकेको नेपालगञ्ज औद्योगिक शहर पनि भएकाले आर्थिक रुपमा नेपालगञ्जलाई सम्पन्न शहरको रुपमा लिन सकिन्छ । औद्योगिक शहरका रुपमा मात्रै नभएर राजनीतिक शहरका रुपमा समेत लिने गरिन्छ ।
राणा विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपालगञ्जले पञ्चायती व्यवस्था बिरुद्ध भएको आन्दोलन र २०६२/०६३ सालको आन्दोलनको समेत नेतृत्व गरेको बताइन्छ । प्रदेश नम्बर ५ को नेपालगञ्ज नै प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने माग यहाँका बासिन्दाको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा ऐतिहासिक शहर पनि भएकाले प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने माग छ । नेपालगञ्ज कोहलपुरमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने माग बाँकेका बासिन्दाको छ ।